परिवार नै लागूऔषध कारोबारमा ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
परिवार नै लागूऔषध कारोबारमा !
२०७१ जेष्ठ ४, आईतवार ०२:४९ गते
भरतपुर । भरतपुर ४ बस्ने वर्ष ५३ की कृष्णा थापा र उनकी बुहारी वर्ष २३ की संगीता थापा हाल चितवन प्रहरी हिरासतमा छन् । लागूऔषधसहित पक्राउ परेपछि उनीहरुलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको हो ।
लागूऔषध कारोबारमै संलग्न कृष्णाको छोरा अर्थात् संगीताको श्रीमान् वर्ष २७ का रमेश थापा भने हाल भरतपुर कारागारमा छन् । रमेश कारागार परेको यो सहित तेस्रो पटक हो । यसअघि दुई पटक लागूऔषध सहित पक्राउ परी अदालतको आदेशमा उनी कारागार बसेका थिए । दुईदुई पटक एउटै मुद्दामा परेर निस्केका रमेश पुनः गत असार महिनामा लागूऔषधसहित पक्राउ परेका थिए ।
तेस्रो पटक एउटै प्रकृतिको मुद्दामा कारागार रहेका रमेश र उनको परिवार लागूऔषधमा पुरै संलग्न रहेको पाइएको छ । अघिल्लो महिना उनकी आमा र श्रीमतीको साथबाट पनि लागूऔषध बरामद भएपछि घटनाको पुष्टि भएको हो ।
लामो समयदेखि लागूऔषध कारोबारमा संलग्न उनको उपनाम ‘बरण्डे’ भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । रमेश र संगीताका २ वर्षको अवोध छोरा अहिले बाध्यताले आमासँगै हिरासतमा छन् ।
गत चैत्र ९ गते आमाले कारोबारका लागि आफ्नै डेरामा डाइजेपाम समेतका ९ सेट लागूऔषध लुकाइ राखेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको थियो । आमा कृष्णाको लागूऔषध कारोबारमा संलग्नताबारे अनुसन्धान जारी नै रहँदा केही दिनअघि रमेशकी श्रीमती संगीता लागूऔषध सहित पक्राउ परिन् ।
बुहारी संगीता थापाले कारागारभित्र नै डाइजेपाम समेतका ३ सेट लागूऔषध श्रीमान्लाई दिन लगेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । परिवारका महिला सदस्य पनि लागूऔषध कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भेटिएपछि चितवन प्रहरी अहिले यस परिवारको गहन अनुसन्धानमा लागिरहेको छ ।
यस आर्थिक वर्ष सकिन अझै २ महिना बाँकी हुँदासम्म प्रहरीले लागूऔषध कारोबार सम्बन्धमा ४० वटा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । जसमा ७७ जना आरोपितहरु रहेका छन् ।
चितवन प्रहरीले यस आर्थिक वर्षमा भारी मात्रामा लागूऔषध बरामद गरेको छ । लागूऔषध कारोबार समाजको लुकेको तर खतरनाक अपराध भएकाले यसलाई निर्मुल पार्न आफूहरु लागि परेको चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी प्रद्युम्न कार्कीले बताउनुभयो ।
चितवन प्रहरीले हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो परिणाममा गत भदौ २ गते भारी मात्रामा लागूऔषध सिमलतालबाट बरामद गरेको थियो । यस घटनामा संलग्नहरु कविलासका मनिराम गुरुङ, सुक्रे तामाङ र रामदिनेश गिरी नेपाली सेनाको श्री ३ नं.राजदल गण खैरेनीटार तनहुँमा कार्यरत रहेका नेपाली सेनाका जवानहरु हुन् । गिरी हालसम्म फरार छन् । बाँकी एक स्थानीय युवा सन्तबहादुर तामाङ हुन् ।
पक्राउ परेका मानिसहरुमध्ये मनिराम गुरुङ र सुक्रे तामाङलाई कारबाहीको लागि नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइएको र सन्तबहादुर तामाङ चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०७० कात्तिक १४ गतेको आदेशले पुर्पक्षको लागि भरतपुर कारागारमा थुनामा रहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुको साथबाट प्रहरीले पत्रिकाले बेरी टेपले बाँधेको अवस्थामा लागूऔषध डाइजेपाम ९०० एम्पुल, व्युप्रिनोर्फिन ११०० एम्पुल बरामद गरेको थियो ।